Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » IMEX America Daahfurka: Xoog Cusub iyo Wadajir
Waana ka maqannahay - Maalinta 1 IMEX America.
Bulshada dhacdooyinka ganacsiga caalamiga ah waxay muujiyeen xoog tirooyin, iyagoo isugu yimid IMEX America, oo maanta ka furmay Las Vegas. In ka badan 3,300 iibsade caalami ah iyo in ka badan 2,250 shirkado soo bandhigay ayaa isu diiwaan galiyay inay ka soo qaybgalaan bandhigga, taasoo ka dhacaysa Noofambar 9 - 11 ee Mandalay Bay, waxaana lagu wadaa inay u gogol xaarto dib u soo kabashada warshadaha.
IMEX America waa guul u ah warshadaha shirarka inay noqoto dhacdadii ugu horeysay ee caalami ah oo furma ka dib markii la qaaday xayiraadii safarka ee Maraykanka.
Munaasabadda sanadkan ayaa astaan ​​u ah toban sano oo bandhigyo guul leh waana tii ugu horreysay in ka badan 2 sano tan iyo markii uu cudurka faafay.
Munaasabadda ayaa ka dhacaysa gurigeeda cusub ee Mandalay Bay ee Las Vegas, Nevada, oo soconaysa maanta ilaa Noofambar 11.
Sannadkan IMEX America, bandhiggii ugu horreeyay ee muddo ka badan laba sano ah, ayaa qayb muhiim ah u ah sidii ay ahayd dhacdadii ugu horreysay ee caalami ah oo la furo kaddib markii la qaaday xayiraaddii socdaalka ee Mareykanka. Bandhigu wuxuu sidoo kale leeyahay guri cusub, Mandalay Bay, wuxuuna u dabaaldegayaa daabacaadiisa 10aad, taasoo ka dhigaysa maalmaha soo socda Las Vegas munaasabad gaar ah.
Samaynta ganacsigu waxay ku fadhidaa xudunta bandhigga, sanadkanna maaha mid ka reeban saddex-meelood laba meelood ballamaha jira ee loo sameeyay ujeeddada cilmi-baarista ama in laga doodo dhacdo gaar ah - calaamad cad oo muujinaysa in iibsadayaashu ay qorsheynayaan inay horay u sii qorsheeyaan ujeedka ganacsiga bilaabista iyo isha ku hay 2022 iyo wixii ka dambeeya.
Calaamad kale oo kalsooni ah oo loogu talagalay qaybta, 2,250+ shirkadaha soo bandhigaya waxay leeyihiin si dhab ah oo caalami ah, oo ku baahsan 200 oo waddan oo wakiil ka ah Yurub, Latin America iyo Aasiya oo fadhiya Waqooyiga Ameerika oo ku yaal dabaqa bandhigga (dhammaan 400,000 sq ft!) .
Of the soo-bandhigayaasha soo laabanaya, 16% waxay maal galiyeen joogitaanka weyn ee bandhigga - qaar, oo ay ku jiraan Baltimore, EventsAir, Boise iyo St Louis, waxay kordhiyeen booskooda istaagida 100% ama ka badan marka loo eego bandhiggii hore ee 2019.
Ku soo dhawoow IMEX America.
Sannadkan bandhiggu waxa uu soo dhawaynayaa bandhigayaal cusub oo ka kala yimid dhammaan meelaha loo socdo, hudheellada iyo qaybaha farsamada ee A ilaa (ku dhawaad) Z oo ay ku jiraan: Amadeus River Cruises, Hopin, Louisiana, MeetingPlay, Minneapolis, Iberostar Hotel & Resorts iyo VenuIQ. Aagga Tech ee u heellan bandhiggu waa kii abid ugu weynaa, taasoo ka tarjumaysa baahida sii kordheysa ee waaxda, iyo maalgashiga tignoolajiyada dhacdada.
Carina Bauer, oo ah maamulaha guud ee kooxda IMEX, ayaa tiri: "Waxaan qabanay bandhigga markii ugu dambeysay laba sano ka hor, waxaanan maanta daahfurnay liiska bandhigayaasha iyo iibsadayaasha, in ka badan 200 oo kalfadhi waxbarasho, oo lagu daray goob cusub. In la yiraahdo waan ku faraxsanahay waa hadal-hoosaad!
"Kadib 10 sano Las Vegas runtii waxay la mid tahay guri labaad, waana ogahay in taasi tahay dareen ay wadaagi doonaan kumanaan qof oo bulshadeena halkan ku nool todobaadkan. Kuweenna ku nool oo neefsada shirarka, dhacdooyinka iyo safarka dhiirigelinta waa wax cajiib ah inaan aragno warshadeena oo dib ugu soo laabatay nolosha.
"Tirooyinka, ballamaha iyo heshiisyada ganacsiga, waxaan ku kalsoonahay inaan dib u eegi doonno daabacaadan 10-aad ee IMEX America oo ah bar tilmaan u ah warshadaha. Digital iyo hybrid waxay si cad u leeyihiin booskooda, laakiin ma jiraan wax garaaca dareenka visceral ee joogitaanka sagxada bandhiga la-hawlgalayaasha, iibsada iyo alaab-qeybiyeyaasha adduunka oo dhan iyo ogaanshaha taas oo si toos ah u horseedaysa shaqo abuurka, horumarinta xirfadeed, horumarinta warshadaha iyo tan ugu muhiimsan dhammaan , saamayn dhaqaale oo togan adduunka oo dhan."
IMEX America waxay sii socotaa ilaa Noofambar 11.